Budada Cetilistat Root (282526-98-1) Soosaarayaasha - Kiimikada loo yaqaan 'Phcoker Chemical'
Budada Cetilistat waa sheeko cusub oo horjoogsata lipase pancreatic oo ay soo saarto Alizyme si loogu daaweeyo buurnaanta iyo cudurada la xiriira… ..
Budada Raw Cetilistat (282526-98-1) video
Budada Raw Cetilistat (282526-98-1) Sharaxaad
Budada ceeriin ee loo yaqaan 'Raw Cetilistat budada' waa sheeko xiniinyaha xannibaadda ee 'pancreatic lipase inhibitor' oo ay soo saartay Alizyme oo loogu talagalay daaweynta buurnida iyo cudurka macaanka iyo cudurrada kale. Waxay u shaqeysaa iyadoo la xakameynayo lipase pancreatic, enzyme oo jajabisa triglycerides ee xiidmaha. Waxay ka hortagtaa dufanka (triglycerides) ee cuntada in la shiido loona beddelo asiidh dufan bilaash ah oo jidhku nuugo. Budada Raw Cetilistat waxay si weyn hoos ugu dhigtay miisaanka iyada oo si fiican looga dulqaaday orlistat.
Root Cetilistat budada (282526-98-1) Sooc
Product Name Budada Cawilistat
Magaca Kiimikada Dufanka Cawilistat (Sub-962); Xinliorlistat; budada Cawilistat (282526-98-1)
brand NAme Gawaarida ama beeraha
Fasalka Daroogada Daawada cayil-ka-qaadashada
Molecular Wsideed 401.58
barafku Psaliid 72.0 ilaa 76.0 ° C
Fdib u soo celinta Psaliid 74 ° C
Color Caddaan-cad Crystal
SOlubility Iska ilaali DMSO, ha ku jiraan biyo
Application Isticmaal si aad u daaweyso cayilka leh dhibaatooyin
Cetilistat, oo sidoo kale loo yaqaano ATL-962, waa naqshadeeyaha cusub ee lipazer-pancreatic waxaa lagu hormariyaa Alizyme si loogu daaweeyo buurnaanta iyo isku-xirnaanta xiriirka wada jirka, oo ay ku jiraan nooca sonkorowga 2. Waxay u dhaqmaysaa sidii la mid ah daroogada da'da weyn (Xinical) iyadoo la xakameynayo lipase pancreatic, enzim oo jebiya triglycerides ee mindhicirka. Iyadoo aan la'iseyn enzyme, triglycerides laga helo cuntada ayaa looga hortagi karaa in lagu rakibo asiidh dufan oo bilaash ah oo aan la karinin. Daawadan waa in lala qaataa cunto caafimaad leh oo dufan leh iyo qadar fara badan oo jimicsi si loo gaaro natiijooyinka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Baadhitaanada bini-aadamka, budada cetilistat ayaa lagu muujiyay inay soo saaraan miisaanka lumay oo la mid ah liiska, laakiin sidoo kale waxay soo saareen saameyno kale oo la mid ah sida saxaraha, dabacsanaan la'aanta, ceshad la'aanta saxarada, dhaqdhaqaaqa mindhicirada, iyo isbaarada. Waxay u badan tahay in isla tallaabooyinka lagu dabaqi karo marka la nuugayo fitamiinada-barafka iyo nafaqooyinka kale ee dufanka leh ee laga yaabo in la xakameeyo, waxayna u baahan yihiin fitamiin dheeri ah oo loo isticmaalo si looga fogaado maqnaanshaha.
Cetilistat powr waxaa lagu ansixiyey Hay'adda Iskaashatooyinka Caafimaadka ee Japan (PMDA) bishii Sebtembar 20, 2013. Waxaa soo saaray Norgine iyo Takeda, ka dibna waxaa laga iibsaday Oblean® by Takeda ee Japan.
Budada Cetilistat (282526-98-1) Mashruuca Hawlaha
Kiniiniga Cetilistat waa budada miisaanka lumay oo loo isticmaalo in lagu daro cunto kalooriye yar. Cetilistat waa lipase lipase inhibitor, waxaay ku shaqaysaa xaddidaadda xaddi badan oo dufan ah oo ka timaadda dheefshiidka oo ku dhex mara jidhka. Dufanka miisaanka luminta miisaankiisu wuxuu u dhigmaa lipase inhibitor wuxuuna si toos ah u shaqeeyaa nidaamka dheef-shiidka halkaasoo uu ka joojinayo ficilka laf-dhabarka lipolytic oo la yiraahdo lipase. Lipases-ka waa waxa jidhku u isticmaalo si uu u dheefshiido dufanka. Hase yeeshee, marka daawadan la qaato cunto, waxay ku xiraa naasaha, taas oo ka hor istaagtay inay dillaacdo baruurta. Dufanka aan la daboolin waxa lagu beddelaa saxarada, taasoo keentay in la kordhiyo dheecaanka dufanku ku yaraado iyo hoos u dhigidda baruurta. Marka la wada isticmaalo cunto yareeyaal kalooriye ah, waxay kaa caawin kartaa hagaajinta miisaanka oo aad u fududeeyso bukaanada miisaankoodu sarreeyo si ay dib ugu noqdaan muuqaalka, taas oo kor u qaadeysa fursadaha miisaanka guul darrada leh. Isticmaalka habka loo isticmaalo waa isku mid sida orodka hore ee orlistat iyadoo la xakameynayo lipase pancreatic.
Faa'iidooyinka oo ah budada Cetilistat (282526-98-1)
Edu Yaraynta miisaanka jirka
▪ Si fiican ayaa loo dulqaatay marka loo eego daawooyinka kale
Qalabka Cetilistat ee lagu taliyey (282526-98-1)
Ketilistat budada ayaa loo heli karaa sida kaniiniga isticmaalka afka, oo ay ku jiraan 120 mg of Cetilistat bilaash ah. Qiyaasta lagu taliyey waa xaddiga 120 saddex jeer maalintii isla markiiba cuntada kadib. Daawada waxaa la qaataa cuntooyin si loo hubiyo in ay shaqeyn karto inta cuntada la miiro, si ay u nuugto dufanka cuntadu ka timaaddo si wax ku ool ah.
Dhibaatooyinka ay keento oo ah budada Cetilistat (282526-98-1)
Bukaannada lagu daaweynayo buurnida leh budada Cetilistat waxay la kulmi karaan waxyeelo. Waa inaad u sheegtaa dhakhtarkaaga haddii tani dhacdo. Waxaa jira waxyeellooyin qaarkood oo tixraac ah:
▲ Xaydhka saxarada
▲ Qabsashada caloosha
▲ Ku fadhiiso dheecaan
▲ Gubashada oilyada
▲ Cillad la'aanta saxarada
▲ Calool xanuun
▲ Saxaro jilicsan
▲ Cudurka dabaysha
▲ Dammaanad joogto ah
▲ Xanuun caloosha
▲ Lalabbo ama matag
▲ Af qalalan
▲ Wadna garaacsanaan la'aan
▲ Daal aan caadi ahayn ama daciifnimo